Qiimaynta Cayaarta Kooxaha Juventus & Tottenham-Xidigii Garoonka %
Qiimaynta Cayaarta Kooxaha Juventus & Tottenham-Xidigii Garoonka
Kooxda Tottenham ayaa sabab buuxda looga dhigay in saddex daqiiqo gudahood ay Juventus ku samaysay wax layaableh isla markaana ay ugu soo baxday siddeed dhamaadka UEFA Champions League isla markaana tartankan looga ciribtiray kooxda totteham . Tottenham ayaa heshay goolka u muuqday in uu Juventus ka tuuray tartankan kadib markii uu Heung-min Son shabaqa soo taabtay.
Laakiin Gonzalo Higuain ayaa daqiiqadii 64 aad Juventus u keenay goolka babaraha laakiin si aan la rumaysan karin saddex daqiiqo gudahood Juventus ayaa Tottenham hogaanka cayaarta ka fara maroojisay kadib markii uu Paulo Dybala markiiba dhaliyay goolka labaad ee ay Juventus guushan layaabka leh ay ku soo gaartay.
Tttenham oo ahayd kooxdii qaybtii hore wax walba garoonka ka samaysay isla markaana heshay fursadihii ugu badnaa ayaa ku khalkhashay labada gool ee saddexda daqiiqo looga dhaliyay waxayna awoodi wayday in ay ka soo kabsato.
Khibrada macalin Allegri sameeyay ayaa cunay rajadii Tottenham ay ku doonaysay in ay qayb ka noqoto kooxaha u soo baxay siddeed dhamaadka Champions League laakiin Juventus oo aan wax guuldaro ah soo arag 21 kii kulan ee tartamada oo dhan ugu danbeeyay ayaa soo laabasho cajiib ah samaysay.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qiimayntii cayaartoyda labada kooxood ee kulankii Wembley Stadium ee ay Juventus ugu soo baxday UEFA Champions League.
Xidigii Garoonka: Gonzalo Higuain oo qaybtii hore kulankan ku dhex lunsanaa ayaa qaybtii labaad sabab buuxda u ahaa in ay kooxdiisu soo laabtay wuxuuna dhaliyay goolkii barbaraha halka uu uu sameeyay caawinta goolkii labaad ee guusha wuxuuna sidaa ugu lug lahaa labada gool ee ay kooxdiisa Juventus ku soo baxday.
Qiimaynta Cayaartoyda Labada Kooxood:
Tottenham: Lloris (5), Trippier (6), Sanchez (6), Vertonghen (6), Davies (6), Dier (6), Dembele (7), Eriksen (7), Alli (6), Son (7), Kane (5)
Juventus: Buffon (6), Barzagli (5), Benatia (5), Chiellini (7), Alex Sandro (6), Khedira (6), Pjanic (5), Matuidi (5), Douglas Costa (6), Higuain (7), Dybala (7)
Magacyada iyo Sawirada Cayaartoydii ugu Caansanayd ee Geeritootey
Wax ka ogow Xiddiga Bellerin oo laga reebay safarka Arsenal ee AC Milan